သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: January 2010
ရုပ်ရှင်တွေရဲ့ Genre တွေဟာ Adventure | Sci-Fi လို့ဆိုလိုက်ရင် ငယ်စဉ်တုန်းကတော့ စိတ်ဝင်တစားကြည့်ဖြစ်တယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ လူပြောများနေပေမယ့် Genre ထဲမှာ Adventure | Sci-Fi အပြင် fantacy နဲ့ action ပါနေတော့ သိပ်ပြီးစိတ်မ၀င်စားမိခဲ့ပါဘူး။ preview မှာလည်း ထူးဆန်းတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ ပစ်သတ်တိုက်ခိုက်နေတာတွေရယ် ကွန်ပြူတာဂိမ်းပုံစံဖြစ်နေတာရယ်ကို သတိထားမိတယ်။ တစ်ခါ 3D လို့ ဆိုပေမယ့်လည်း အခြားဖြစ်ရပ်မှန် documentary 3D တွေလောက် ကောင်းပါ့မလား၊ animation တွေသိပ်များနေမလား စတဲ့အတွေးတွေနဲ့…..
…… ဟိုတစ်ပတ်စနေနေ့က ရပ်ရှင်ရုံထဲရောက်သွားခဲ့တယ်။ စောစောလေးကြိုရောက်လို့ ခုံမှာထိုင်ပြီး ကလေးတွေပဲ လာကြည့်မှာပဲ.. ဟုတ်ကောဟုတ်သေးရဲ့လားဆိုပြီး တွေးနေမိပြန်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ရုံထဲကို မျက်မှန်အိတ်လေးတွေကိုင်ပြီး လူတွေ တစ်ဖွဲဖွဲ ၀င်လာကြတယ်။ ဒီမြို့က ရုပ်ရှင်ရုံတွေဟာ သာမန်အချိန်တွေမှာ လူတစ်ဝက်ရှိရင်တောင်ကံကောင်း။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ရုံကြီးတစ်ရုံထဲမှာ ရုံသေးလေးတွေ အခုနှစ်ဆယ်လောက်ရှိတော့ အခြားကားပေါင်း နှစ်ဆယ်လောက်ကိုလည်း တစ်ပြိုင်နက်ပြလေ့ရှိတော့ ရုံတစ်ရုံမှာ လူအနည်းငယ်ပဲရှိတတ်တယ်။ အခုကတော့ လူတွေ တစ်ဖွဲဖွဲဝင်လာလိုက်တာ လျှံတောင်ကျတော့မယ်။ ပရိသတ်ကတော့ ထင်ထားတဲ့အတိုင်း တစ်ဝက်ကျော်ကျော်က ဆယ်ကျော်သက်တွေများတယ်။ Rated 14-A‎‎ ဆိုပေမယ့်လည်း အသက်ရှစ်နှစ်၊ ဆယ်နှစ်လေးတွေလည်း ပါတယ်။ အဲဒီချိန်မှာ ESL ကျောင်းလာတက်ပုံရတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် ကိုရီးယန်းယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့ မိန်းကလေးတွေ အယောက်အစိတ်လောက် ထိုင်နေတဲ့ အတန်းနဲ့ ရှေ့တန်း၊ နောက်တန်းတွေမှာ ၀င်ထိုင်ကြတယ်။
ရုပ်ရှင်မစခင် အခြားရုပ်ရှင်တွေရဲ့ preview တွေအားလုံးကလည်း ကလေးကားတွေ။ ရုပ်ရှင်စတော့ 3D မျက်မှန်ကိုတပ်၊ ခုံကိုကျောမှီပြီး စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းမဲ့စွာ ကြည့်နေလိုက်တယ်။
ယာဉ်ပျံကြီးထဲက cryo vault ထဲက cryo capsules တွေ၊ ဆွဲငင်အားသုညမှာ လွင့်မျောနေတဲ့ med tech. တွေ၊ အော်ပရေးရှင်းစင်တာထဲက ကွန်ပြူတာခုံတွေ၊ ဘိုင်အိုဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာရှိတဲ့ amniotic အရည်ထဲက လူနဲ့အဲဒီလပေါ်က လသားတွေရဲ့ DNA တွေကိုပေါင်းစပ်တီထွင်ထားတဲ့ ကိုယ်ခန္ဒာတွေ၊ အထူးသဖြင့် Dr. Grace Augustin (Sigourney Weaver) နဲ့ Colonel Miles Quaritch (Stephen Lang) တို့ရဲ့ အတွေ့အကြုံရင့်ကျက်နေတဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေ၊ ပြောင်မြောက်တဲ့စကားပြောတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်က ရုပ်လုံးကြွလာတယ်။
ဒီရုပ်ရှင်ကားရဲ့ Genre ဟာ Action/Adventure/Suspense/Thriller/Scifi/Fantasy‎ လို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် လူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ရုပ်ရှင်ရဲ့genre အပေါ်ယူဆချက်တွေဟာ ဆန့်ကျင်စွာကွဲပြားသွားကြမှာသေချာတယ်။ ကြာကြာဆက်ကြည့်ရင် ကိုလိုနီစိတ်ဓာတ်ဆိုင်ရာ ချယ်လှယ်အမြတ်ထုတ်မှုအပိုင်းတွေကိုပါ ထည့်သွင်းထားတာကို တွေ့မြင်လာနိုင်တယ်။
အဲဒီအထဲမှာမှ ပန်ဒိုရာလပေါ်က ရှိသမျှအရာမှန်သမျှကို ချယ်လှယ်ခွင့်ရထားတဲ့ ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Resources Development Administration ခေါင်းဆောင်Parker Selfridge ရဲ့ စစချင်းပြောလိုက်တဲ့
“နယ်ခံတွေကို လှည့်စားနိုင်ဖို့ သူတို့လို နေတတ်၊ စားတတ်၊ ပြောတတ်၊ ဆိုတတ်ရမယ်…” ဆိုတဲ့ စကား။
You’re supposed to be winning the hearts and minds of the natives. Isn’t that the whole point of your little puppet show? If you look like them, if you talk like them, they’ll trust you?
ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့တင်.. anti-colonialism /anti-capitalism လှုံ့ဆော်လိုက်တယ်၊ လမ်းခင်းလိုက်တယ်ဆိုတာ သိသာနေတယ်။
Isn't that the whole point of your little puppet show? You walk like them, you talk like them. We build themaschool, teach them English, but after how many years the relations with the indigenous are only getting worse.
မင်းရဲ့မထိရောက်တဲ့ ရုပ်သေးပွဲပဲ။ နယ်ခံတွေအတွက် ကျောင်းတွေဆောက်ပေးထားတယ်၊ အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးတယ်.. သူတို့လိုနေထိုင်စားသောက်တယ်၊ ဒါတောင်မှ ဆက်ဆံရေးတွေအဆင်မပြေလာဘူး လို့ Selfridge က စကားကို တင်လိုက်တယ်။
အဲဒီချိန်မှာ “Yeah, well that tends to happen when you use machine guns on them”. လို့ Dr. Grace Augustine က စကားကို ချ လိုက်တယ်။
ပထမအခန်းမှာတင်.. သူတို့တွေရဲ့ စကားအတင်အချတွေကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ နောက်ဆုံးလူဖြူတစ်ယောက်ယောက်ကပဲ ခေါင်းဆောင်လုပ်မယ်၊ နယ်ခံမိန်းကလေးတစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ နှလုံးသားကို အနိုင်ရမယ်၊ ပြီးတော့ နယ်ခံတွေကိုခေါင်းဆောင်မှုပြုပြီး အမြတ်ထုတ်သမားတွေ (လူဆိုးတွေကို) ပြန်ပြီး တိုက်ထုတ်တော့မယ့်ရုပ်ရှင် တစ်ခုဖြစ်မှာကို ကြိုမြင်နိုင်ပါတယ်။ (အချို့သော မြန်မာရုပ်ရှင်ကားတွေလို.. မြို့သားကအမြဲ ပညာတတ်၊ ရုပ်ချော၊ စိတ်သဘောကောင်း၊ သူတော်ကောင်းဖြစ်ပြီး နယ်ကမိန်းကလေးရဲ့ နှလုံးသားကိုကော၊ မိသားစု၊ တစ်ရွာလုံးရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကို ရပြီး၊ မိန်းကလေးကို တစ်ဖက်သတ်ကြိုက်နေရှာတဲ့ နယ်သားလေးကပါ လေးစားပြီး အချစ်ကိုစတေးပေးလိုက်ရတဲ့ ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်မျိုးသရပ်ဖော်ထားမယ်ဆိုတာ မြင်နိုင်ပါတယ်)
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:37 PM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : ရုပ်ရှင်ခံစားချက်, ဆောင်းပါး
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 5:11 PM2comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:32 PM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
မလေးရှားနိုင်ငံ၊ ပီနန်မြို့က ထုတ်တဲ့ မြန်မာဂျာနယ်တစ်စောင်ပါရှင်။
လစဉ်ထုတ်ဝေမယ့် ဂျာနယ်ရဲ့ ပထမဆုံးခြေလှမ်းသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ရဲရင့်ဂျာနယ်လိုမျိုး အခြားသော မြန်မာဂျာနယ် လေး၊ငါးစောင်ခန့်ရှိတယ်လို့လည်း ၀မ်းသာစွာနဲ့ သိရပါတယ်။
ဒီဂျာနယ်ထဲမှာ ပွဲဦးထွက်အနေနဲ့ ကျွန်မ၏ "ကနေဒါသို့" ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးလေးကို မြင်ရတော့ ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ "ကနေဒါသို့" ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးနောက်ဆက်တွဲတွေကိုလည်း ဂျာနယ်မှ ဆက်လက်ဖော်ပြသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။
နောက်ပြီး...စာဖတ်သူရဲ့ အရှိုက်ကိုထိလိုက်တဲ့ ကျွန်မအလွန်နှစ်သက်သော..
ကျွန်ပြုဖို့ ကျွန်တော်တို့ဆီကို လာတယ်။
လို့ အစပြုတဲ့ "ကောင်းကင်ကို"ရဲ့ "ကျွန်" ဆိုတဲ့ ကဗျာ... နဲ့
ကောင်းကင်မှာ နေညို၊ ရွှေအိုရောင်တွေ မြင်ရင်
လို့ နှုးညံ့စွာဖွဲ့ဆိုထားတဲ့ "တင်ထူးရွှေ"ရဲ့ အချစ်ကဗျာ လှလှလေးတစ်ပုဒ်အပြင်....
အခြားအခြားသော ရသ၊ သုတ၊ ဆောင်းပါး၊ ဟာသတွေလဲ ပါဝင်ပါတယ်။ မလေးရှားရောက် ကိုယ့်မြန်မာလူမျိုးများအတွက် သုတ၊ရသများ၊ ကဗျာ၊ ဆောင်းပါးများ မျှဝေလိုပါက စာမူများနဲ့ အကြံပြုချက်များကို editoryeyintjournal@gmail.com သို့မဟုတ် associateeditoryeyintjournal@gmail.com များကို ပေးပို့နိုင်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်လို့... ။
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:30 PM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : ဂျာနယ်
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:13 AM 1 comment: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
အမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ စာအုပ်ကိုစတွေ့လိုက်တဲ့ အချိန်မှာ တွေးလိုက်မိတာလေးက မော်ဒန်ပန်းချီတွေ ခေတ်စားနေတဲ့အချိန်မှာ စာအုပ်မျက်နှာဖုံးက နည်းနည်းဆွဲဆောင်မှုနည်းနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မာတိကာကိုကြည့်လိုက်တော့ ၃၅ ပုဒ်မှာ ကိုယ့်အကြိုက်ဆုံး “ရုပ်ရှင်လက်မှတ်လေးနှစ်စောင်” ကိုဖတ်ရမှာနဲ့တင်တန်နေပြီး ။နောက်ပြီး စာတည်းမှူးရဲံ အမှာစာက ဒီလိုညွှန်းထားပါတယ် “သူ့စာမူများသည် ကန်ရေပြင်ပေါ်တွင် ရှပ်တိုက်ပြေးလွှာနေသော လေပြေတစ်ခုအလား ချမ်းနေမြ့နေသည်” တဲ့ တကယ်ဆိုတဲ့ စာပါလားကွဲ့….ရို့ :P
မျက်နှာများသူလို့တော့ ဆိုကြမယ်မထင်ပါဘူး။ နဂိုကတည်းက ရွေးချယ်နေကြောင်း ကြေငြာထားရင်ပေါ့နော်.. :P တစ်ကယ်တော့ ယောင်္ကျားတွေမှာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် ပိုများတာပါ။ ယောင်္ကျားတွေဟာ ပိုလွတ်လပ်သလို အပစ်တင်ခွင့်နဲ့လည်း ပိုကင်းလွတ်တယ်။ စကားပုံတွေကိုက ယောင်္ကျားကောင်း မောင်းမတစ်ထောင်တဲ့ ၊ မိန်းမကောင်း ပန်းတစ်ပွင့်ပန် တဲ့ (ဆိုးလိုက်လေခြင်း..) ဒါဟာဦးနှောက်ကို သက်သက်မဲ့ လျှော်ဖွပ်ခြင်းကိစ္စဖြစ်တယ်) ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီစကားပုံတွေဟာ အဘိဓာန်မှာကို မရှိသင့်တော့ဘူး။ ဒီစကားပုံတွေကြောင့် အတူတူစောင့်စည်းရမှာကို မိန်းမတွေက စောင့်စည်းရမှုအပိုင်းက ပိုများပါတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ကိုချည်းကပ်လာသူတွေအထဲကမှ ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတာပါ။ ကိုယ့်ကိုမချည်းကပ်တဲ့သူကို ကိုယ်ကစပြီး ဘယ်လိုသွားပြောမလည်း (မြန်မာပြည်မှာပြသော ကိုးရီးယားကားတွေထဲမှာတော့ မသိ) society တစ်ခုလုံးနဲ့ ဘာသာတရားတွေရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုတွေအောက်မှာ၊ ဦးနှောက်နဲ့ နှလုံးသားလွန်ဆွဲပွဲတွေမှာ ဦးနှောက်ရဲ့အနိုင်ရမှုရရှိခြင်းဟာ အောင်မြင်မှုတစ်ခုလို့ လူအများစုက သတ်မှတ်နေကြဆဲ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ၊ မိန်းမတွေရဲ့ စောင့်စည်းထိန်းသိမ်းမှုတွေဟာ ခေါက်ရိုးကျိုးလို့ နေသားကျလာကြတာ ကြာပါပြီ….. ဒါကတော့ မောင်မျိုးရေးတာနှင့် ဘာမှမဆိုင်ဘဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ ခံစားချက်အချို့ကိုရောချပြီး မိန်းမထုကြီးတစ်ခုလုံးဘက်မှ အဒွန့်တက်ခြင်းသာဖြစ်၏)
(ဒီစာလေးအတွက် မောင်မျိုးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:11 AM 1 comment: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : letters from fans
ဘာရယ်မဟုတ် စာရေးလို့ကို မရတော့လို့ လူတွေမလာသော ဘလောဂ်မှာ တိတ်တဆိတ်လာရေးခြင်းပါ။
အခြားသူများရဲ့ခံစားချက်များကို ကိုယ်တိုင်ခံစားချက်လုပ်ပြီး စပ်ဆိုသော..
ခပ်ညံ့ညံ့ကဗျာများ၊ စာများကို တိတ်တဆိတ်လာပြီး ဖွဲ့ဆိုနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်..
အိမ့်ချမ်းမြေ့ဆိုတာကို မြေမြှုပ်မသဂြိုလ်ခင် အထိပေါ့။
ကလောင်ကို မထိန်းချင်သော....(အဲ.. ကီးဘောဒ်နှင့်လက်ချောင်းများကို မထိန်းချင်သော.. :P)
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:22 AM2comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : ကဗျာမဟုတ်တဲ့ကဗျာများ, မောင်
ကိုရင်ညိန်းစီစဉ်တဲ့ မိခင်မေတ္တာဘွဲ့ကဗျာစု များပါ။
တင့်ထူးရွှေ ရဲ့ “ကြိုးမညီတဲ့ ဂစ်တာတစ်လုံးရဲ့ မယ်လိုဒီ”
မောင်ခင်လေး ရဲ့ “သို့မေမေ”
အမရာ ရဲ့ “ခပ်လှမ်းလှမ်းက လှမ်းရင်းနဲ့လွမ်း”
အိုင်လွယ်ပန် ရဲ့ “ကကြီးကနေ အ.. အမေ့ကိုငါဆိုပြခဲ့”
ဖုန်းမြင့် ရဲ့ “မြန်နှုန်းမြင့်စိတ်နဲ့ပဲ မေမေ့ကို ဆက်သွယ်လိုက်တယ်"
မင်းယွန်းသစ် ရဲ့ “မေမေ့ဆီရေးတဲ့ စာမျက်နှာမှာ ခြစ်ရာတွေဗရပွနဲ့”
စိုင်းလောဝ်ပိန်း ရဲ့ “အမေအတွက်ကဗျာ ၃”
Open mind ရဲ့ “အမေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှ မဝေးဘူး”
ပိုင်မင်းဆွေ ရဲ့ “မေမေဟာရန်သူတွေကို တစ်ယောက်တည်းရင်ဆိုင်”
ညိမ်းညို ရဲ့ “ရနံ့၅”
ဖြိုးငယ် ရဲ့ “မေမေဖတ်ဖို့ ကဗျာတစ်ပိုဒ်”
သက်ထွန်းငြိမ်း ရဲ့ “လေနှင်ရာလွင့်တဲ့အမှိုက်တစ်စ”
ဗသားချော ရဲ့ “မေမေနဲ့အတူ”
ဆောင်းယွန်းလ ရဲ့ “မေမေ့ကိုလွမ်းလို့ ဆိုမိတဲ့သီချင်း”
ရွှေပြည်သူ ရဲ့ “ကတိ”
သစ်ကောင်းအိမ် ရဲ့ “ဆောင်းများ”
ပန်ဒိုရာ ရဲ့ “အဆုံးအစမဲ့သော”
အောင်သာငယ် ရဲ့ “မရှိတော့ပြီဖြစ်သော မိခင်နှင့် စကားပြောခြင်း”
သင်ကာ ရဲ့ “အေးမြနွေးထွေးခြင်း”
အိန္ဒြာ ရဲ့ “အမေကတော့ ကျွန်မကို လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးလိုက်ပြီ”
သိုးထိန်း ရဲ့ “မေမေနဲ့ကျွန်တော်”
အိမ့်ချမ်းမြေ့ ရဲ့ “အသံရှင်”
ကောင်းကင်ကို ရဲ့ “မေမေစင်တာကလော့စ်”
မိုးမြင့်တိမ် ရဲ့ “အမေကျေနပ်မှာပါလေ”
သံစဉ်ဖြိုး ရဲ့ “အမေ့ရင်ခွင်ရဲ့ အဝေးမှာ”
ဗညားရှိန် ရဲ့ “အမေ့ခြေရင်း ထာဝရဦးချကန်တော့ပါရစေ”
ရိုးမြင့်အောင် ရဲ့ “ကောင်းကင်မှာလမင်း မြေပြင်မှာစမ်းရေ”
ရွှန်းမီ ရဲ့ “သက်စောင့်ဂါထာ”
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:09 AM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:37 AM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ